Ny kinova vaovao an'ny Recalbox dia misy 18.06.27 | Avy amin'ny Linux
Herinandro lasa izay ny kinova vaovao an'ny Recalbox dia natomboka 18.06.27 izay amin'ny alàlan'ny fanambarana iray ao amin'ny bilaoginao ofisialin'ny tetikasa Nanambara ny fisian'ity kinova vaovao ity ireo mpamorona Recalbox.
Ny fanonona ny Recalbox dia efa natao teto amin'ny bilaogy imbetsaka, fa ho an'ireo izay tsy mahalala izany fizarana Linux izany dia mbolaIzy io dia azoko lazaina fa rafitra GNU / Linux loharano malalaka sy misokatra noforonin'ny tetikasa Recalbox East manolotra safidy maro isan-karazany lalao sy console lalao.
Manomboka amin'ny rafitra arcade voalohany ka hatramin'ny NES, MEGADRIVE / GENESIS ary na dia sehatra 32-bit aza, toy ny PlayStation, manana Kodi koa izy io, koa afaka mankafy ny atiny multimedia amin'ity fizarana ity ianao.
Tsy toy ny fizarana Linux ampiasaintsika, Recalbox dia kendrena amin'ny fialamboly multimedia ary hamadika ny solo-sainao ho ivon'ny fialamboly.
Ny tetik'asa Recalbox dia nifototra tamin'ny voalohany ary naterina tamin'ny fitaovana Raspberry Pi, saingy manana kinova PC ihany koa io.
Entre ny emulator lehibe izay hitantsika amin'ity fizarana ity dia: Atari 2600, Atari 7800, NES, Game Boy, Game Boy color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Famicom Disk System, Master System, Megadrive (Genesis), Gamegear, Game and Watch, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket, FBA ( ROM vitsivitsy), iMame4all (ROM sasany), PCEngine, Supergrafx, Amstrad CPC, MSX1 / 2, ZX Spectrum, PSX, Sega Cd, Sega 32X, Sega SG1000, Playstation, ScummVM, Vectrex, VirtualBoy ary Wonderwan.
1 Momba ilay kinova Recalbox vaovao
2 Fampisehoana lalao an-tserasera vaovao
3 Fiovana ao amin'ny Recalbox
4 Sintomy ny Recalbox 18.06.27
Momba ilay kinova Recalbox vaovao
Amin'ity fanontana vaovao an'ny Recalbox 18.06.27 ity, ny intro EASports dia nampiana ho an'ny rafitra tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny soccer any Russia.
Azontsika atao ihany koa ny manasongadina fa ireo mpandraharaha Recalbox dia nanao ezaka be tamin'ny fampandrosoana ity kinova vaovao ity satria nampiditra fampiasa vaovao izay tadiavin'ny mpampiasa fizarana mihoatra ny iray izy ireo.
Fampisehoana lalao an-tserasera vaovao
Ny fiasa vaovao dia Netplay izay mampifandray ny Retroarch amin'ny rafitra ary miaraka amin'ity endri-javatra ity afaka milalao ny lalao Retro an-tserasera ianao ary mamaha ny zava-bita toy izany koa ireo console amin'ny lalao video ankehitriny.
Ity endri-javatra vaovao ity azonao atao ny mampandeha azy ao "Menu> Fikirana lalao> Fikirakirana Netplay" Avy eto, azonao atao ny mampandeha sy manafoana ny Netplay, manamboatra ny anaranao Netplay, misafidy seranana.
Azonao atao koa ny manampy ny CRC32 hash amin'ny lisitry ny lalao hahalalanao lalao tsara kokoa ao amin'ny lobby Netplay.
Netplay manana GUI ho an'ny maody ho an'ny mpanjifa ary safidy hanombohana ho mpampiantranoAmin'izany ianao dia afaka mamorona lisitry ny lohateny misy ary miaraka amin'ny fanohanana hahafahana mampiasa ity asa ity.
Rehefa manatanteraka an'ity GUI ity dia hasehony amintsika ny angona samihafa izay hitantsika:
Username (miaraka amina sary kely raha lalao natomboka tamin'ny Recalbox)
Fifaninanana Hash (raha manana ROM mitovy amin'ny hash mitovy amin'ny lalao ianao)
Latency fifandraisana sy fampahalalana hafa
Fiovana ao amin'ny Recalbox
Dentro amin'ireo fanovana hafa mety ho hitantsika amin'ity kinova vaovao ity dia azontsika atao ny manasongadina, lfanovana ny famantaranandro, izao tsy voafetra amin'ny fotoana eo an-toerana fa namboarina miaraka amin'ny ora GTM.
ihany koa Fantatro tsara kokoa ny fizotry ny fanavaozana sy ny fisafidianana emulator ao anatin'ny rafitra ity dia ialana amin'ny fanombohana ny sehatr'asan'ny mpampiasa sary sy ny fampisehoana ny soatoavin'ny default.
Ary farany, azo marihina koa fa nanomboka tamin'ity kinova vaovao ity Ny Recalbox dia hampiseho ireo lalao ao anaty fampirimana ho lohateny iray hafa fa tsy amin'ny fampirimana, miaraka amin'izany, ny fivezivezena eo anelanelany dia voarindra ary alaviro ny fidirana eo anelanelan'ny lahatahiry mba hampandeha ny lalao.
ihany koa nanampy ilay fiasa "Refresh lalao list" izay azonao ampiasaina mivantana avy amin'ny menan'ny rafitra.
Sintomy ny Recalbox 18.06.27
Si te hampidina an'ity kinova Recalbox vaovao ity ve ianao? Tsy maintsy mankany amin'ny tranokala ofisialiny ianao ary ao amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny misintona ny sarin'ny rafitra mifanaraka amin'ny solo-sainanao na Raspberry Pi. Ny rohy dia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny kinova vaovao an'ny Recalbox 18.06.27 dia misy izao
Azureus dia hoy izy:
Heveriko fa ny bilaogy dia efa tsy miasa amin'ny mpampiasa loatra.
Misaotra ny vaovao, fantatrao ve raha azo havaozina mivantana izy io nefa tsy apetraka intsony? Manana ny kinova taloha an'ny boxbox aho, rehefa nanavao aho fa tsy dia tena azoko ny fomba fitantanana ny fanavaozana ao amin'io rafitra io.
Valiny tamin'i Azureus
Javier Rosales Cabrera dia hoy izy:
Salama, ao amin'ny kinova vaovao dia tsy afaka manome hira ho an'ny emulator tsirairay aho toy ny amin'ny kinova teo aloha… .wit shit…. Afaka manampy ahy ve ianao ary milaza amiko ny fomba hanovana ireo rakitra rakitra hahafahana manao izany toa izany? (Ny hira tsirairay miaraka amin'ny emulator mifanaraka aminy dia mety)
Valiny tamin'i Javier Rosales Cabrera
Mametraka azy ireo amin'ny endrika ogg miaraka amin'ny bitrate marina ve ianao?